ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဒေါက်တာ ဒေါ်မြတ်မြတ်အုန်းခင်သည် မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ သြစတြေးလျ သံအမတ်ကြီး H.E. Bronte Moules နှင့် အဖွဲ့အား တွေ့ဆုံ
နေပြည်တော်၊ ဧပြီလ(၃)ရက် -
လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာ ချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဒေါက်တာ ဒေါ်မြတ်မြတ်အုန်းခင် သည် ဒုတိယ ၀န်ကြီး၊ တာဝန်ရှိသူများနှင့် အတူ ဧပြီလ (၃)ရက်နေ့ နံနက် (၁၁း၃၀) နာရီအချိန်တွင် ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီးရုံး၊ နေပြည်တော်၊ မေခလာ ခန်းမ၌ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ သြစတြေးလျ သံအမတ်ကြီး H.E. Bronte Moules နှင့် အဖွဲ့အား တွေ့ဆုံပြီး၊ ကလေးသူငယ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှုများ၊ အမျိုးသမီး ကဏ္ဍဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ၊ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာ ချထားရေး လုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အတွေ့အကြုံများ ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး နည်းပညာနှင့် အထောက်အပံ့များ ရရှိနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းများ၊
လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၏ (၄၉)ကြိမ်မြောက် ရှင်ပြု၊ သီလရှင်ဝတ် အလှူတော် မင်္ဂလာ အခမ်းအနား
လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ၀န်ကြီးဌာန၊ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၏ (၄၉)ကြိမ်မြောက် ရှင်ပြု၊ သီလရှင်ဝတ် အလှူတော် မင်္ဂလာ အခမ်းအနားကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်းရှိ မသန်စွမ်း သက်ငယ်သင်တန်း ကျောင်းရှိ ယမန်နေ့ နံနက် (၉)နာရီက ကျင်းပရာ နိုင်ငံတော် သံဃမဟာ နာယက အဖွဲ့ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ ဆရာတော် အဂ္ဂမဟာ ပဏ္ဍိတ ဘဒ္ဒ န္တ အရိယာ လင်္ကာရထံမှ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာ ချထားရေး ၀န်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး ဒေါ်စုစုလှိုင်၊ ဌာနဆိုင်ရာ အကြီးအကဲများ၊ ၀န်ထမ်းမိသားစုများနှင့် အလှူရှင်များက ငါးပါးသီလ ခံယူဆောက်တည် ကြပြီး ဆရာတော် သံဃာတော်များအား လှူဖွယ်ဝတ္ထု ပစ္စည်းများ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းကြကာ လှူဒါန်းမှု အစုစုအတွက် ရေစက်သွန်းချ အမျှပေးဝေ ကြသည်။
အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှု တားဆီးကာကွယ်ရေး ဥပဒေကြမ်း ရေးဆွဲရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ
နေပြည်တော် ဖေဖော်ဝါရီ (၂)ရက် -
မြန်မာနိုင်ငံသည် အမျိုးသမီးများအား နည်းမျိုးစုံဖြင့် ခွဲခြားဆက်ဆံမှု ပပျောက်ရေးဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ သဘောတူစာချုပ် (United Nations Convention on Elimination of all Forms of Discrimination Against Women – UNCEDAW) ကို ၁၉၉၇ ခုနှစ်၌ သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုး ခဲ့ပါကြောင်း၊ အဆိုပါ သဘောတူစာချုပ် အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံများ၏ တာဝန် တစ်ရပ်အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသည် အမျိုးသမီးများအား အကြမ်းဖက်မှုမှ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး ဥပဒေကို တိတိကျကျ ပြဌာန်း ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်လာပါကြောင်းဖြင့် ယနေ့နံနက် ၉ နာရီတွင် နေပြည်တော် ဟိုတယ်ဇုန်ရှိ သင်္ဂဟဟိုတယ်၌ ကျင်းပသော မြန်မာနိုင်ငံ ဥပဒေများနှင့် စီဒေါ သဘောတူစာချုပ်၊ အမျိုးသမီးများ အပေါ် အကြမ်းဖက်မှု တားဆီးကာကွယ်ရေး ဥပဒေကြမ်း (Draft on Anti-Violence Against Women Law)ရေးဆွဲရေး အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲတွင် လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာ ချထားရေး ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဒေါက်တာ ဒေါ်မြတ်မြတ်အုန်းခင် က အမှာစကား ပြောကြားရာတွင် ထည့်သွင်း ပြောကြားသွားကြောင်း။
Latter Day Saint Charities မှ ဘီးတပ်ကုလားထိုင် (၉၅)စီးနှင့် မသန်စွမ်းသုံး အထောက်အကူပြု ပစ္စည်းပေးအပ် လှူဒါန်းပွဲ အခမ်းအနား
နေပြည်တော်၊ မတ်လ (၂၉)ရက် -
လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာ ချထားရေး ၀န်ကြီးဌာန၊ လူမှုဝန်ထမ်း ဦးစီးဌာနသို့ အမေရိကန်နိုင်ငံ Latter Day Saint Charities မှ ဆဋ္ဌမအကြိမ်မြောက် ဘီးတပ်ကုလားထိုင် (၉၅)စီးနှင့် မသန်စွမ်းသုံး အထောက်အကူပြု ပစ္စည်းပေးအပ် လှူဒါန်းပွဲ အခမ်းအနားကို ယနေ့ နံနက်ပိုင်းက လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန အစည်းအဝေး ခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ရာ Latter Day Saint Charities, Country Director မှ ဘီးတပ်ကုလားထိုင်များနှင့် မသန်စွမ်းသုံး အထောက်အကူပြု ပစ္စည်းပေးအပ် လှူဒါန်းရခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ဘီးတပ်ကုလားထိုင်များနှင့် သက်ဆိုင်သော စာရွက်စာတမ်းများကို လွှဲပြောင်းပေးအပ်ရာ လူမှုဝန်ထမ်း ဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးစိုးကြည်မှ လက်ခံရယူခဲ့ပါသည်။
အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုမှ တားဆီးကာကွယ်ရေး ဥပဒေမူကြမ်း ရေးဆွဲရေးအကြို အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ
အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုမှ တားဆီးကာကွယ်ရေး ဥပဒေမူကြမ်း ရေးဆွဲရေး အကြိုအလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲကို ယနေ့ နံနက် ၉း၀၀ နာရီတွင် နေပြည်တော် ဟိုတယ်ဇုံရှိ သင်္ဂဟ ဟိုတယ် Grand Ball Room ခန်းမတွင် ကျင်းပသည်။
အခမ်းအနားသို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမောင်မောင်ဆွေနှင့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသမီးရေးရာ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်မြမြ၊ မြန်မာနိုင်ငံ မိခင်နှင့် ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး အသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ ဒေါ်မွန်မွန်အောင်၊ ဌာနဆိုင်ရာများမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး တန်းတူညီမျှ ဖြစ်ရေးကွန်ယက် အဖွဲ့ဝင်များ တက်ရောက်ကြသည်။